China Compostable Garbage Bag vagadziri uye vatengesi | Leadpacks
Iyo compostable marara bhegi isina chero epurasitiki zvigadzirwa!
Yedu fekitori compostable marara mabhegi uye zvinhu zvakasimbiswa se compostable maererano neEuropean standard EN 13432. Nokushandisa mabhegi mune zvakatipoteredza zvinhu zvinoshamwaridzana unoratidza zvose zviri kunze uye vatengi vako kuti une chimiro chegirini uye unotsigira kusimudzira kwakasimba.
Kana iwe uchida mabhegi emarara ane compost ane dhizaini yako uye logo, Leadpacks inogona kubatsira. Isu tinopa mabhegi muhukuru hwakasiyana, maumbirwo uye makobvu kuti aenderane nezvinodiwa zvese. Tinogona kuwedzera marogo, mifananidzo kana chero mamwe mameseji anotungamirwa neprofile. Iyo biodegradable rolling mabhegi anodhindwa anosvika mana mavara pamativi maviri.
Iyo Compostable Garbage Mabhegi Sherufu Hupenyu ndeye 10-12 mwedzi.
Material PLA/PBAT/Chibage Starch
Application Garbage/Recycle, nezvimwewo
Parizvino tiri kuona kufarira kuri kukura mukuderedza kushandiswa kwepurasitiki yechinyakare, nevatengi uye, kunyanya, nevezvematongerwo enyika zvakare. Nyika dzinoverengeka dzakatounza kurambidzwa zvachose kwemabhegi epurasitiki. Maitiro aya ari kupararira pasi rose.
Mabhegi eLeadpacks mu100% biodegradable uye compostable zvinhu zvinogona kubatsira kune yakasvibira yekambani mbiri panguva imwe chete ichibatsira kuvandudza nharaunda. Nehana yakanaka, unogona kushandisa compostable marara bhegi kune chero chinangwa uye compost iwo mushure mekushandisa.
Iyo compostable marara bhegi yakavakirwa pane yakakura chikamu chezvezvezve zviwanikwa kubva kumiti-based zvinhu. Izvi zvinoreva kuti CO2 shoma inoburitswa mumhepo, sezvo zvidyarwa zvinotora CO2 sezvazvinokura, zvichiita kuti isanyanya kukanganisa nharaunda pane kugadzirwa kwepurasitiki ine mafuta.
Zvakapfuura: Biodegradable Flat Bag
Biodegradable Marara Mabhegi
Chibage Starch Bag
Mabhegi ePlastiki anoparara
Plastiki Marara Mabhegi